Kukho indawo kule hlabathi Ebizwa ngokuthi "Dubai"
Kukho indawo kulomhlaba ebizwa ngokuba yi "Dubai"
Dubai - Zonke Izinto ezinkulu kunye Ncinci
Ngamana 11, 2019
Dubai "Life Changer"
Ngamana 13, 2019
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at Ngamana 13, 2019
Sonke siyamthanda i-UAE
Kukho i indawo Kweli lizwe libizwa ngokuba "dubai". "DUBAI" indawo yokuphumla kwengqondo yakho iphithikeziweyo. Ibiyindlela yokuphumelela yamabali kwabaninzi ababefuna ukufikelela nokufikelela kwiinjongo zabo imisebenzi. I-United Arab Emirates, Ibililizwe elahlukileyo kubahambi abahle kwihlabathi liphela. Ngokubanzi, ngubani emva Ukutyelela le ndawo ingaqhelekanga bumenze bumsulwa ingqondo yabo kunye nomphefumlo. Ibiyeyona minyaka imangalisayo ye-15 ukuba ndiyinxalenye yeli lizwe. Imihla ngemihla inobugqi kule ndawo imangalisayo. Ixesha ngalinye iDubai ityhila into entle ngayo yenza amaxesha afunekayo abatyeleli kunye nabakhenkethi.
Ubungqina bam bobuqu eDubai. Ndize njengomntu ongaziwayo kweli lizwe kwaye ngoku ndiva njengenxalenye yalo. Indinike usapho lwam kunye neenkumbulo ezintle zokuxabisa kwaye ndalufumana uthando kunye nenkxaso engaphaya komlinganiselo. Kwenze ukuba ndikhanye ngeendlela ezininzi kwaye kuye kwandinika ithemba ngeentsuku zam zodandatheko. Inkokeli yeli lizwe ngumntu othandwayo onomtsalane, ozinikeleyo, oqeqesho kodwa ozithobileyo nokhathalayo. Sisikhokelo sakhe kunye nombono owenze iDubai umhlaba ube yiWonderland. Ungumzekelo, umntu, endijonge kuye.
Ukubuk 'iindwendwe, ukufudumala kunye nokubonelela ngendwendwe nganye ngemfihlakalo amava sisithembiso saseDubai. Ngaphezu koko, undwendwe olundwendwele apha lunemibuzo kunye neenkolelo luqinisekile ukuba lubuyele lunoncumo olukhulu ebusweni babo. Makhe ndikwenze ukuba uzive Dubai kwaye masiqalise.
I-Exteriors emhlophe eqaqambileyo yeBurj Al Arab ithatha ifom ebusuku. Njengoko uqikelelo kunye nemiboniso ekhanyayo iboniswa kwisakhiwo sayo kumdaniso wokulinganisa. I-Credit: Burj Al Arab Facebook.
Burj Al Arab-Iconic Ihotele ibekwe kwindlela yeJumeirah ejonge kwiAraban Gulf. I-Emirates yindawo yokuthoba kwaye zikhulule kuxinzelelo nakwinkxalabo. Kwakhona kwehlabathi intofontofo kunye nokufikelwa yihotele kukwenza ukuba uthandane nenkonzo eyenzelwe wena kunye nee ambience azibonisayo. UJumeirah Madinat Jumeirah-Ukuba unqwenela ukuziva ngathi uyinkosana okanye iNkosazana bekungekho enye indawo okanye mhlawumbi ngendiyibize njengebhotwe.
Ubukhosi kunye nokusetwa kwehotele kunjalo undwendwe olundwendwele kule ndawo luqinisekile ukuba luyaziva ubukhosi. Ukuba kufuneka ndibhale phantsi kuzo zonke iihotele ezinobunewunewu kwaye ndithethe ngazo ziya kuba zininzi kakhulu kodwa ewe ndizakubiza ezimbalwa ezenze ukuba mna kunye neendwendwe zam sizive ngokwahlukileyo kwaye kananjalo unikwe imvakalelo yokufezekisa ixesha ngalinye Ndibatyelele uJumeirah Zabeel Saray, Atlantis the Palm, Fairmont Dubai, Armani ibekwe eBurj Khalifa njl njl.
Iindwendwe ezinencasa yokudla okumnandi zinokuzonwabela zonke iintlobo zokutya kwaselwandle okuziinkozo, iigraphics zama-Arabhu, ukutya okutyayo kwase-Itali, Indian Iincoko ezimnandi, ukutya okuchukumisayo kunye neepesenti ezilingayo kwiindawo zokutyela ezahlukileyo ezijikeleze iDubai. Undwendwe lungatya ukuze lutye kwaye luvuye ukutya okunexabiso lokutywina isisu salo esihlungayo.
I-Dubai, i-United Arab Emirates Mkhulu!
Mna ndedwa ndineendawo ezininzi zokutyela endizithandayo Kodwa ukukhankanya ezimbalwa ezibeke into engalibalekiyo entliziyweni yam yiPierchic ebekwe phezu kweParis ejonge ulwandle oluhle ikwenza ukuba ukonwabele ukutya kwakho ngelixa umoya opholileyo ujijisa iinwele zakho, iAmla Restaurant eseJumeirah Zabeel Saray inika imvakalelo eyiyo yenkcubeko yamaIndiya kunye nokunambitheka kweIndiya, Indawo yokutya kwaselwandle eAl Mahara-Indawo e-Burj Al Arab ungonwabela okumnandi ngelixa ubukele ubuhle bezidalwa zaselwandle.
Zininzi iindawo ezintle ezingajongwayo kodwa indawo yokutyela nganye ineempawu zayo zokutyikitya, imeko-bume, ulandelelwano lweenkonzo kunye nobukhazikhazi bokubuxabisa obunika undwendwe Amava WOW kwaye yongeza kumgaqo wabo weenkumbulo.
I-Dubai Spa kunye namaziko okuhlala kakuhle
Abo bakholelwa kukuphila ubomi obunempilo kunye nothando ukuhambisa ubuntu babo bangaphakathi kungabalekela lula kwii-Spa ezahlukeneyo. Ngaphezu koko, intlalontle amaziko abekwe eDubai Uya kubiza ezimbalwa I-Moksha Spa, i-Talise Spa, kunye, neArmani Spa njl. Kukhetho lonyango olukhethekileyo olukhoyo inikezelwa undwendwe ngokweemvakalelo zabo. Emva kwempatho yabo ngokuqinisekileyo undwendwe liziva lonwabile kwaye umphefumlo wabo uzinikezela ngokupheleleyo kwiimvakalelo zoxolo ngaphakathi.
Amanenekazi namantombazana angamakhoboka ezivenkileni awusoze aneliseke njengoko enokufumana yonke into ayinqwenelayo kwiplanethi apha eDubai. Umzekelo, iimpahla ezinophawu, izixhobo zokumangalisa, ii-decors zasekhaya, ukutya okunempilo, ukutya okuthengayo kwiigadi zegadi. Ubumnene Uqinisekile ukuba uzimisele ukufumana izixhobo ze-elektroniki ezifumaneka kwiivenkile ezinomdla kunye imoto indawo yokubukisa ngemidlalo efanelekileyo iimoto ewe, ngokuqinisekileyo uya kubaqhuba.
Izinto zokwenza e Dubai kunye nezingane
Kids Iindwendwe ezithanda umdla, umdla kunye nokubona IDubai inezinto ezininzi ezinomdla zokundwendwela kwaye unikwe ingxelo ngeendawo ezinjengeDubai theme park, IDesert Safari, Dubai Creek, Dubai Museum kunye neJumeirah Mosque, iGlow Gardens kunye nezinye ezininzi ezizokuhamba.
Abantwana abaza apha baqinisekile ukuba banemvakalelo ngabo eAlice kwilizwe lase Wonderland kwaye iya kuqala kukhuphiswano oluninzi ifumaneka kwiindawo ezininzi njengesixeko esimnandi, I-Dolphin Aquarium, Kidzenia, iPlanethi yoMlingo, iLigoland, i-IMG World, iiphuli zamanzi e-Aqua, iipaki zamanzi zasendle i-Wadi ngokuqinisekileyo iya kubagcina bexakekile kwaye bemangalisiwe njengoko bendwendwela iindawo ezahlukileyo abanokubenza bazive ukuba bangahlali apho ngonaphakade.
I-Dubayi yenzelwe bonke abo beza kufuna amathuba emisebenzi!
I-Dubai nayo ibe yindawo yokuzonwabisa eyintandokazi yamaninzi kunye noqeqesho lomhlaba, isikhokelo kunye nomcebisi kubo bonke abo beza kufuna amathuba emisebenzi. Maninzi amabali eerabha kubutyebi, zero kwiqhawe ngubani bafumana impumelelo yabo kwaye balifezekisa iphupha labo njongo kweli lizwe.
Kwandiswa iladi kubafikayo nakwabo bafuna umngeni uneengcambu ezininzi ngokunabisa ulwazi lwazo kunye nokuzipenda ukuze zikhanye njengeenkwenkwezi.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga kuko konke endinako Ukuthi yiDubai yindawo yemilingo ngobuhle bayo, inkcubeko kunye namava angaphaya kokuthanda. I-Dubai iyachuma kwaye ihlala isanda kuwo onke amabakala yiyo yonke indwendwe ephindaphindiweyo xa iphinda ityelele kwaye inento ukwahluka kumava. I-Dubai yindawo yokwenza iinkumbulo ezingalibalekiyo kumzuzu ngamnye ochithelwe apha. Uthando lweDubai kunye nokuziva iDubai. Makhe ndiwugqibe ngombongo.
Ndithanda iDubai, Poem
Kukho indawo kule hlabathi
Okuthiwa yi "Dubai" Ihlabathi lephupha
Ukulingwa, ukuthakazelisa, ngaphaya kweengcinga
Ndikubethelela ukuba yiyona nto yendalo
Abantwana, iNtsapho, Ababini kunye nabadala apha
Wonke umntu unokufumana ububele kunye nokunyamekela
I-Dubai ihlala ilwela ukuzisa amaphupha kunye nokucinga.
Ilula, i-Serene and Grand
Ubuhle kunye nentsikelelo ziya kubetha ngonaphakade kulo mhlaba.
Inkampani yeSixeko sase Dubai, ukuthetha jikelele, ngoku kubonelela ngamathuba emisebenzi elungileyo. Ngaphezu koko, siyapha guides kuba Umsebenzi eDubai. Iqela lethu ligqibe ekubeni longe ulwazi ngolwimi ngalunye Dubai idlulisa. Ke, unale nto engqondweni, ngoku unokufumana izikhokelo, Iingcebiso kunye nomsebenzi kwi-United Arab Emirates ngolwimi lwakho.
Iimpazamo eziqhelekileyo ze-12 abagibeli akufanele zenze ngelixa i-Metro Metro
Iindawo ezigqibeleleyo zokutyelela kunye nokutyelela e Dubai e2019
I-DUBAI: Umzekelo woPhuhliso